Salamo 126 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865] - (Sal 126)
[Fifalian'ny efa nampodin'i Jehovah, sy fifonana ho an'izay mbola babo] Fihirana fiakarana. Fony Jehovah nampody an'i Ziona avy tamin'ny fahababoany, Dia tahaka izay nanonofy isika. [Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga]
Fahizay dia feno hehy ny vavantsika Sy fihobiana ny lelantsika; Dia natao tany amin'ny Jentilisa hoe: Zava-dehibe no nataon'i Jehovah ho an'ireny.
Eny, zava-dehibe no nataon'i Jehovah ho antsika, Ka dia faly isika.
Tanteraho, Jehovah ô, ny ham-podiana anay avy amin'ny fahababoana, Tahaka ny fiverenan'ny riaka any amin'ny tany atsimo.
Izay mamafy am-pitomaniana Dia hijinja am-pifaliana.Mandeha mitomany mitondra ny voa afafiny izy, Fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fihobiana kosa.
Mandeha mitomany mitondra ny voa afafiny izy, Fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fihobiana kosa.